75 Go’aannada Internetka ee Sannadka Cusub 2011 | Martech Zone
75 Go’aannada Internetka ee Sannadka Cusub 2011
Isniin, Disembar 20, 2010 Arbacada, Juun 24, 2015 Douglas Karr
Waxaa la joogaa xilligii dhamaadka sanadka. Sannadkan wuxuu na siiyay waxyaabo badan oo aan uga xanaaqno… iyadoo ay sii soconayaan xukunka xoogaa shirkado waaweyn ah oo hoos u dhigay habdhaqanka warbaahinta bulshada ee aan la aqbali karin.
Waa kuwan waxyaabo runtii runtii igu cayaaraya, markaa aan hagaajino kuwan si aysan u dhicin 2011:
JOOJI DHAQANKA. Sida laguu jirrabay oo kale, farahaaga ka fogee QORAALKA CAPS.
Haddii aan ka baxo emailkaaga, ha u dirin a xaqiijinta emaylka aniga.
Beddel sawirka kan ukunta oo sawir dhab ah kaa qaadaya barta Twitter-ka. Waxay ahayd 3 bilood iyo 2 Tweets horeyba.
Ha dirin dib u bilaw. Xitaa ha sameyn resume. Waan helnay LinkedIn mudo 8 sano ah hada, isticmaal.
Haddii aadan ku habboonaan karin Astaamaha 140, iisoo dir.
Haddii aanan akhriyi karin emaylkaaga gudaha 2 ilbiriqsi, isoo wac.
Fariin ka tag, waan email waad soo noqotay
Xadgudub! Waxaan aragnaa WAY aad u badan maalmahan. Ka soo Carissa Newton.
Tufaaxa: Hindisaha screens oo aan u baahnayn in la tirtiro ama aanad bilaabin in aad ku dhejiso teebabka qalabkaaga.
Jooji iimaylka gadaal iyo gadaalba waqtiyada ilaa jadwal kulan. Isticmaal kan Tungle!
Jooji isticmaalka sawiro hore hadaan nahay avataar, labadeenuba waan ognahay inaadan intaas oo kale u ekaanin. Markii aan shaqsi ahaan u kulanno midkoodna kuma aqoonsan doono ama waxaan la yaabanahay sababta aan ula hadlayo hooyadeyda raacsan. Waa caadi, anigu waan baruurnahay oo fool xunnahay hadda, sidoo kale.
Jooji ah duck. Mar kasta oo aad aragto saaxiib oo adeegsanaya, waa inaad ku jeesjeestaa iyaga oo bulshada dhexdeeda ah. Waxay kuugu mahadcelin doonaan 2 sano gudahood markay ogaadaan sida doqonimadu u muuqatay.
Haye Google… haddii aanad dareemin, ka Warshadaha SEO waa warshadaha ugu koritaanka badan Suuqgeynta. Taasi waxay macnaheedu noqon kartaa inay wax ka khaldan yihiin algorithm-kaaga maxaa yeelay shirkaduhu waxay maalgashadayaan malaayiin si ay u maareeyaan. Iska daa inaad iska indhatirto.
Haddii aad go'aansato inaad furto dukaan loogu talagalay geeks, hubi inaad kaydiso 2XL illaa 5XL funaanado Kama helin meydadkaan P90X, waxaan ka helnay qoritaanka.
Jooji inaad gasho bartaada Unsubscribe. Adiga iyo anigu waxaan labadeenaba ognahay inaan lumiyey erayga sirta ah 4 sano kahor markii aan isqorey. Anigu ma booqan bartaada tan iyo - dirista emayl toddobaad kasta ma caawinayso.
Qof fadlan samee a WYSIWYG editor qoraalka taasi runti si fiican ayey u shaqeysaa. Haddii HTML5 ay ku dari karto Video, maxaan u lahaan karin tafatire u dhashay?
Jooji sameynta ballanqaadyada khadka tooska ah si aad qof u caawiso ama aad wax ugu dallacdo iyada oo aan lala socon. Ka soo Amy Stark.
Fadlan u sheeg dowladda, dowlad kasta, inay joojiso isku dayga ay ku dhexgalayso internetka. Waa waxa kaliya ee dhab ahaan sii shaqeynaya - maxaa yeelay dowladuhu ma taaban.
Fahmaan taas haddii aad i hor dhigto xayeysiis a Ka Gudub link, waan ka booday xayeysiiska iyo daabacaaddaada.
Jooji inaad ii sheegto waxaaga App -ka iPhone. Qofna dan kama lihi, kulligeen waxaan leenahay Droids.
saar salaaxid, Facebook… waa iska caadi gurguurta.
Jooji qiimeynta shirkadaha ku jira balaayiin markay da 'yar yahiin oo aan xitaa macaash helin. Uma qalmaan, qofna ma bixin karo. Haddayna ku siiyaan $ 6 bilyan, ha noqon nacas oo diid dalabka.
Halkii shaqaaleynta qof si aad ugala hadasho sida ay ufiicantahay software-kaagu, dhamaanteen naga yeelo mid wanagsan oo halkii ka hagaajin lahaa softwareka nacalada leh Waxaad kuheesatay sawir aad ufiican heesta hogaamiyaha dhabarka, wali waxaan iskudayeynaa inaan kahadalno qaladka qoraalkaas meesha kusugnaa 4 sano. Ma ahan cadaalad.
Gabadhaydu waxay i weydiisatay inaan joojiyo ka faallaynta boggeeda Facebook oo aan u hanjabo ragga isku dayaya inay wax ku dhuftaan. Waa inaan ka fakaraa. Waan ka fikiray… maya.
Jooji u xukumida shirkadaha maamulahooda guud gudaha jeex jeexan iyo koofiyad cowboy, xafiis xafiis oo qabow, kororka isticmaalaha, ama lacagta VC already hore ayaan u sameynay taas 90kii mana aysan shaqeyn. Ku bilow inaad ku xukuntid shirkadaha sida ugu dhakhsaha badan ee isticmaalayaashu u boodayaan markabka marka ninka xiga ee qabow ee jiiniska jeexjeexan iyo koofiyadda cowboy uu yimaado.
Sii wad inaad u dirto qorayaal aniga oo kale ah alaabta lagu ciyaaro ee bilaashka ah sidaa darteed waxaan u dhaqmi karnaa is yeelyeelid, muhiim ah, oo aan sii wadnaa qeexida nafteena sida saameynta. IPads soo dhawow:
Dadka qaar waxay joojiyeen inay wax ku akhriyaan Net-ka. Bilow a podcast, samee a video… Isticmaal dhexdhexaadiyayaal kala duwan si loo gaaro dhagaystayaal kala duwan.
Raadi xirfadlayaal - jooji inaad qof walba u sheegto nuuga bulshada waana inay lacagtooda oo dhan ku bixiyaan raadinta.
Xirfadleyda baraha bulshada - jooji inaad qof walba u sheegto raadinta nuugayo waana inay lacagtooda oo dhan ku bixiyaan arrimaha bulshada.
Adigu waxaad u adeegtaa saddex ujeedo: Haysashada, Kicinta iyo La Wareegista. Waxaad illaawday ugu yaraan midkood, miyaanay ahayn?
Shirkaddaadu waxay leedahay xafiisyo ka qiima badan toban jeer boggaaga. Qofna ma weydiin waxa ku soo noqo maalgashiga wuxuu ku socday sariirta maqaarka, jooji weydiinta xafiiskaaga internetka. Lacagta ku bixi, u eeg xirfadle, waxaad heli doontaa feejignaan dheeri ah - waan ballan qaadayaa.
Jooji kahadalka inta aragtiyada bogga waad helaysaa Ganacsiga waxaa lagu cabiraa dollar iyo senti. Haddii aadan qaadanaynin macaamiisha lacag bixinta, istiraatiijiyaddii waa jabtay.
Jooji isku dayga inaad noqoto # 1 erayga ugu adag marka ay jiraan boqollaal kale ereyada muhiimka ah taasi waxay ganacsi ugu horseedi laheyd shirkaddaada.
Jooji isku dayga inaad darajo caalami ah marka macmiilkaagu ku yaal meel 25 mayl u jirta xafiiskaaga. Maui qofna Maui dan kama lihi waxyaabaha gaarka kuu ah ee qado (haddii aadan Maui joogin mooyee).
Maya, arjiga aad maalgashanayso ma wada sameyn doono. Waxay u badan tahay inaysan xitaa sameyn doonin wixii iibiyuhu yiri. Iyo muuqaalada lagu yaboohay ee siidaynta soo socota? Iyagu ma imanayaan, sidoo kale.
Ku dheji waxa aad ku kalsoon tahay, qor la-taliyayaal leh khibrad la xaqiijiyay si ay kaaga caawiso inaad inta kale barato.
Qof fadlan ma iibsan lahaa Yahoo! durba ?!
Hadaad iisoo dirto aniga iyo aniga ha jawaabin, fadlan ha ii soo dirin tweet, fariin Facebook ah, fariin qoraal ah oo ha iiga furan daaqad wada sheekeysi. Kama jawaabin maxaa yeelay waxaan ka shaqeynayaa waxyaabo mudnaanta leh… adiguna ma aadan ahayn (maanta).
Facebook horumariyeyaasha… ma iska deyn kartaa interface-ka isku-buuqsan oo keliya kaligaa dhowr toddobaad. Fadlan?
Waad ku jees jeesaysaa dadka taga Hooters, laakiin waxaad ka iibsan doontaa cinwaanno GoDaddy? Runtii?
Haddii aad dhaaftay Qaybta 1, ma tihid beta mar dambe. Jooji iskuday inaad siiso kuwa wax dhisaya ee maskaxdaada ka cudurdaaranaya caqliga jabay.
Suuqgeyntaada internetka ma ahan mashruuc, waa miisaaniyad u baahan dayactir joogto ah, hagaajin, iyo casriyeyn ah. Ku dar miisaaniyadda 2011 oo hubi inaad cabbiri karto soo noqoshada maalgashiga.
Waxaa laga yaabaa inaadan ku fiicnayn warbaahinta bulshada.
Ka durug Flash. Waxay ahayd mid qabow intii ay socotey… u daa sawir qaadayaasha iyo horumariyeyaasha ciyaarta. Wax kasta oo kale waa inay noqdaan HTML5, Ajax, iyo CSS. (@nacaybtire ii soo gudbiyey maqaal weyn oo ku saabsan HTML iyo Flash.)
Jooji intaad igu xukumeyso taageerayaasha iyo kuwa raacsan Waan haystaa Waxaad ii wadaa nuts oo isku dayaya inaad sii wadato.
Haddii mid ka mid ah qorayaasha aad jeceshahay, oo kaa caawiyay inaad farsamadaada ku xoojiso sanado, ayaa la soo baxa a buugga. Tag u iibso - waa waxa ugu yar ee aad sameyn karto. 😉
Dhammaanteen ma waxaan si dhab ah u qorsheyneynaa inaan ka qeybgalno SXSW in la damaashaado oo lumiyo waxsoosaarkii usbuuc?
Hadaad tahay suxufiga weyn, Jooji taageerida shirkadaada weyn ee warbaahinta isla markaana halkan u soo bax oo sameyso lacag aad adigu iska qorto, soo sheegto oo aad sameyso iyadoon tifaftire duug ah ama madbacad kala bixin waxyaabahaaga Hadday ku fiicnaan lahaayeen, wershadoodu ma aadayaan musqusha.
Warbaahinta bulshada iyo la taliyayaasha suuq geynta internetka maahan Amish. Hadaad awoodo, lacag sii… hadaadan dib uga noqon, shaqada ka cayri. Koob kafee ah oo lagu kala iibsado talo bixin aan bixinayn kirada.
Raadinta mashiinka raadinta waxay u baahan tahay kala sarrayn goobta ah, qaabeynta bogga, ku habboonaanta nuxurka iyo dhiirrigelinta goobta ka baxsan. Haddii aadan helin dhammaan kuwaas, runti ma aadan kireysan khabiir SEO ah.
Hadaad ganacsi ku dhexjirto warbaahinta bulshada, ma waxaad siineysaa waddo cad oo shabakaddaadu u marayso inay dhab ahaan kula macaamisho? (ie, Wicitaanka Waxqabadka, Bogga Soo Degitaanka, Foomka, iwm.)
Justin Bieber: 15-ka daqiiqadood ee magacaagu jiray wuxuu jiray 8 bilood ka hor. Bax… timahaaga u mariso sida saxda ah.
Tiro dad ah ayaa ka akhrisanaya bartaada a qalab mobile. Goobtaadu xitaa ma ku shaqeysaa aaladda moobaylka? Ma lagu hagaajiyay iPhone, iPad, Droid iyo Blackberry?
Haddii aadan wax abuurin, jooji inaad qof walba kubbadiisa ku dumiso adigoo ag maraya cambaareyn wixii ay qabteen.
Jooji sameynta naqshadeeyayaasha websaydhkaaga inay waxyaalaha ka shaqeeyaan Internet Explorer 6. Kaliya maahan inaad taageereysid biraawsar jaban, amni-darro ah, waxaad sidoo kale gacan ka geysaneysaa khamriga iyo heerarka is-dilka
Haa, sida xaqiiqda ah waxaan ahay / ahaa / ahaan doonaa mashquul.
Ha siin dadka waqti adag oo ku saabsan otomatiga iyo isdabamarin waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waxay haystaan ​​shaqaale 3 ah waxayna leeyihiin 50,000 oo akhristayaal… sii nasiino!
Aabe, fadlan jooji inaad ii soo dirto emayllada garabka midig ee garabka midig ee la soo saaray 7 sano ka hor Snopes. The NSFW sawirada dumarka quruxda badan wali wey fiicanyihiin, in kastoo. Jeclow Wiilkaaga, Doug.
Hadaad wali isticmaaleyso popover / popunder daaqadaha leh xayeysiinta, waxaan fahamsanahay inaad aad u baahan tahay oo aadan lacag ka heli karin khadka tooska ah. Tag iibinta buugaagta taleefannada.
Jooji inaad i weydiisato inaan saaxiib kuu ahaado afargeesood marka aadan isla qaarada ku wada nooleyn oo aanan ku aqoon.
Google, fadlan gali an API on Webmasters si aan u awoodno la soco darajadeena on keyword kasta. Waxaan ku qabaneynaa marwalba qalab aan ognahay inaadan jeclayn. Ka gudub.
Mar dambe ma ahan wax qabow in laga soo saaro iPhone 4 kulanka. Hadda Droids waxay leeyihiin barnaamijyo isku mid ah oo runti way dhameystiri karaan wicitaan taleefan. Waxaad u baahan tahay iPad hadda si aad ugu ekaato qabow kulanka qadada. (Fadlan tixraac # 26)
Twitter, fadlan noo oggolow inaan ku dhejinno falanqaynta boggeena iyo kaayaga xeerarka ololaha wixii xiriir ah ee soo galaya ee ku teedsan xayndaabyada adeeggaaga. Ganacsiyadu si qurux badan ayey u bixin doonaan tan si ay u cabbiraan ROI dhab ah dhammaan barnaamijyada iyo gudbinta websaydhka ee Twitter.
Dhammaan kuwa soo-saareyaasha softiweerka ah Sababtoo ah ku dhowaad wax walba way awoodaan xisaab-celin maalmahan, maahan inay micnaheedu tahay inaad sii deyso nooc cusub 16-kii saacadoodba.
Microsoft: Fadlan ka jooji shirkadaha oo dhan inay isticmaalaan Bing ama Microsoft.com iyo sidoo kale dhammaan rakibaadda iyo casriyaynta xirmooyinka alaabada Microsoft marka aysan haysan nooca ugu dambeeya ee Internet Explorer ordaya. (Marka laga reebo kuwa Internet Explorer bogga cusboonaysiinta.)
Dhammaan horumariyeyaasha websaydhka: Fadlan xannib dhammaan noocyada Internet Explorer wax ka yar nooca 8 oo waxaad siisaa xiriiriye ay ka soo dejisan karaan Chrome, Firefox, Safari ama xitaa Opera. Wax waliba waa horumar.
Tufaaxa: Jooji qaska iyo a kamarad ku jirta ipadka horeba. Jooji iibinta cusbooneysiinta.
Jooji wicitaanka dadka khadka tooska ah ee shaqo weyn qabta Xiddigaha Xiddigaha. Iyagu ma aha Xiddigaha Xiddigaha.
Laba-jibbaaran: qaab kasta ha noqdee Gowalla adeegsanaya si loo helo meesha ugu dhow, fadlan xadi fikradda. Waan ka jirannahay raadinta barnaamijkaaga.
Waan ognahay inay u muuqato mid macquul ah… waxaad dirtaa 1 emayl waxaadna kaheleysaa jawaab aad u wanaagsan. Inaad ku qarxiso 26 emayl oo dheeraad ah ayaan kaa helayn 26 jeer heerka jawaabta. Waan ballan qaaday.
Jooji hadalka ku dhufo aragtidaada 3 jirka ah ChaCha. Waxaan u rognay goobta ugu dhaqsaha badan internet-ka. Plus Scott iyo kooxdiisuba runtii waa dad waawayn oo ay la shaqeeyaan.
Google: Jooji wax bixinta Google Analytics lacag la’aan. Cidina si sax ah uma isticmaasho mar dambe, adiguna waad qiimeysay soo celinta maalgashiga oo run ah Analytics shirkadda bixin kara.
Haddii aad waxay leeyihiin inaad iska diiwaangeliso bulshadaada si aad u hesho taageero, ka dib kor u qaadista kobaca bulshadaada ee suuqgeyntaada waxay bixineysaa fariin isku dhafan. Laakiin sii waaxdaada suuq-geynta markasta kor u qaad, taasi waa qurux fiican.
Jooji hadalka badan ee ku saabsan sida weyn shirkadaha qaar waxay sameynayaan warbaahinta bulshada darteed. Way fiicnaayeen ka hor warbaahinta bulshada!
Ma jiro wax hagaajin fudud suuqyada. Waxaan haynaa dhexdhexaadiyeyaal badan, waqti yar, macaamiisha soo jiidashada leh, iyo madax dalbanaya. Waa maratoon maahan orod. Shaqo tag oo jooji akhrinta qashinkaas.
Tags: 20112011 qaraarada
U beddel LinkedIn CRM oo leh Diigo
fure shati lataliyaha caafimaadka pc
Febraayo 24, 2011 saacadu markay tahay 10: 01 AM
Fekrado badan oo waxtar leh halkan, haah. Hagaag, waan ogahay xaqiiqda in jawaabtayda halkan ay tahay mid halkan ku daahday laakiin waxaan rabaa inaad ogaato in laygu madadaaliyay qoraalkan waxayna i siineysaa fikrado badan oo cusub oo aan ku bilaabo. Taasi waa qaraarro badan oo internetka ah sanadkan 2011.